Jashen V16၊ အသေးစိတ်လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်၎င်း၏အင်္ဂါရပ်များ | Gadget သတင်း
ဖုန်စုပ်စက်များ ကြိုးမဲ့လက်ကိုင်များသည်ယခုဒဏ္legာရီဆန်ဆန်စက်ရုပ်ဖုန်စုပ်စက်များမှမြေများစွာစားနေသည်။ Actualidad Gadget မှကျွန်ုပ်တို့သည်ဤထုတ်ကုန်အမျိုးအစားသည်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များရှိသူများသို့မဟုတ်ပိုမိုထိရောက်ပြီးနက်ရှိုင်းသောသန့်ရှင်းရေးကိုရှာဖွေနေသူများအတွက်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်ဟုအခါအားလျော်စွာသင်ပြောခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
ယခုတစ်ကြိမ်တွင်စျေးကွက်ထဲတွင်ကမ်းလှမ်းမှုများစွာနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည့်စွယ်စုံ သုံး၍ စျေးသက်သာသောလက်ကိုင်ဖုန်စုပ်စက် Jashen V16 အသစ်ကိုသင်ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ယူဆောင်လာပါပြီ။ အမေဇုန်နှင့် AliExpress ကဲ့သို့သောအခြားအွန်လိုင်းအရောင်း ၀ က်ဘ်ဆိုက်များတွင်တွေ့ရသည့်ဤလူကြိုက်များသည့်ထုတ်ကုန်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုမည်။ ထို့ကြောင့်သင်အမှန်တကယ်ထိုက်တန်သည်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
ဤထူးခြားသော Jashen ထုတ်ကုန်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသောပြင်ပအသွင်အပြင်ဖြင့်စတင်သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်၎င်းသည်ငါတို့နှင့်အလွန်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့မကူညီနိုင်ပါ။ Jashen V16 သည် Dyson's ကဲ့သို့သောလူကြိုက်များသောအခြားလေဟာနယ်သန့်ရှင်းစက်များနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။
ဤကိစ္စတွင်သူတို့သည်မီးခိုးရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်များနှင့်အတူတူညီသောအရောင်များကိုပင်အလံကဲ့သို့ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ စင်စစ်အားဖြင့်ပင်အထွေထွေဒီဇိုင်းပင်အထက်ဖော်ပြပါထုတ်ကုန်များကိုကျွန်ုပ်တို့အားများစွာသတိရစေနိုင်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပလပ်စတစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ညှိနှိုင်းခြင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ တိုင်ကြားချက်အနည်းငယ်ရှိသည်
Jashen V16 ဖုန်စုပ်စက်ကိုသင်ဝယ်ချင်ပါသလား။ ဒီအားသာချက်ကိုယူပါ LINK.
သိသာထင်ရှားတဲ့ပလတ်စတစ်တွေဟာအတော်လေးပါးလွှာနေပုံရတယ် ပြီးတော့သူတို့ဟာအချိန်ကုန်လွန်လာတာကိုသူတို့ဘယ်လိုခုခံတွန်းလှန်ရမလဲဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး၊ အထူးသဖြင့်ရေတံခွန်အကြောင်းပြောရင်၊ သိုက်များကဲ့သို့သောကဏ္sufferများသည်အလွန်ခံရနိုင်သည်။ သို့သော်ထုတ်ကုန်၏စျေးနှုန်းကိုကျွန်ုပ်တို့ခွဲခြား။ မရနိုင်ပါ။
အလေးချိန်နှင့်စပ်လျဉ်း။ ထိန်းချုပ်မှု၏ ergonomics နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ပိုင်ဆိုင်သည်ကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုခြင်းသည်အဆင်ပြေပါသည် စုစုပေါင်းအလေးချိန်၏ 2,5 ကီလိုဂရမ်။ အရှည် 112 စင်တီမီတာဖြစ်ပါတယ် ကျနော်တို့ဥပမာ, သိမ်းကျုံးများအတွက်သင့်လျော်သောဆက်စပ်ပစ္စည်းထားလျှင်။ အလေးချိန်နှင့်အရှည်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စံတိုင်းတာမှုများရှိသည်။
ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်သည်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုထောက်ပံ့ပေးသည် ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ဒီဖုန်စုပ်စက်ကိုဆက်စပ်ပစ္စည်းအနည်းအကျဉ်းသာရောင်းတဲ့အမှတ်တံဆိပ်တွေရှိတယ်။ ဒါကငါလုံးဝနားမလည်ဘူး။ သို့သော် J16 တွင် VXNUMX မော်ဒယ်လ်တွင်ကျွန်ုပ်လိုအပ်သည် (သို့) အနိမ့်ဆုံးဟုသတ်မှတ်သည် areasရိယာအားလုံးတွင်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရန်။
သတ္တု extension ကိုပြွန်
dual ညှိညှိနှိုင်းမှု LED motorized ဖြီး, ပိုပြီးဖုန်နှင့်ကော်ဇောများအတွက် jalisco နှင့် bristle brush
ထောင့်များတွင်အများဆုံးစုပ်ယူဘို့ Flat nozzle
အမြင့်ဆုံးစုတ်ယူခြင်းနှင့်ထောင့်သန့်ရှင်းရေးတို့အတွက် bristles နှင့်အတူ Flat nozzle
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်တော့ငါတို့တွေပါ ၀ င်နိုင်တဲ့အရာတွေနဲ့ဘာမှမလွဲပါဘူး ကြမ်းခင်းများ၊ ဆိုဖာများ၊ ထောင့်များနှင့်၎င်း၏ LED brush မှအကျိုးကျေးဇူးများကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရှင်းထုတ်နိုင်သည်။ ဤသည် LED သည်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်နှင့်သင်ကအကွာအဝေးမှပိုကောင်းကြည့်ဖို့ခွင့်ပြုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အများကြီးတန်ဖိုးထားသည်။
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့် Jashen V16 ကို ၀ ယ်ပါ LINK.
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၌တွေ့ရသည့်အတိုင်း jalisco brush နှင့်ကော်ဇောဖြီးသည်ကျွန်ုပ်တို့အားနေ့စဉ်သန့်ရှင်းရေးကိုခွင့်ပြုသည်။ ဒီ "တံမြက်စည်း" ဖြီးဖုန်ဖယ်ရှားခြင်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌ပိုကောင်းတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပူဇော်ဖို့မော်တာဖြစ်ပါတယ် မြေပြင်၌ဖြောင့်။
Jashen V16 ၏အားသွင်းယူသည့်ဆဲလ်ခုနစ်လုံးပါသောလီသီယမ်ဘက်ထရီနှင့်စတင်ပါသည်။ 2.500V တစ်ခုချင်းစီ၏ခုနစ်ယူနစ်နှင့်အတူစုစုပေါင်း 3,6 mAh ။ ဤနည်းအားဖြင့်လေးနာရီကြာအားသွင်းရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ပျော်မွေ့နိုင်ပါလိမ့်မည် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်၏မိနစ်လေးဆယ် ပါဝါပေါ်မူတည်။
ဤဝေါဟာရများနှင့်အားသွင်းအခြေစိုက်စခန်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း၊ ကြမ်းပြင်သန့်ရှင်းရေးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့အတည်ပြုနိုင်ခဲ့သည့်ကြားခံစွမ်းအင်ဖြင့်ကြမ်းပြင်ကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းသည်လုံလောက်သည်ထက်ပိုလိမ့်မည်။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပြproblemsနာများမတွေ့ရပါ။ သိသာထင်ရှားသည့်ဝန်သည်အတော်လေးနှေးကွေးသော်လည်း၊ ၎င်းသည်ကုန်ပစ္စည်းကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်လည်းအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။
အဆိုပါမော်တာစုစုပေါင်း 350W ကိုပေးထားပါတယ် အများဆုံးစုတ်ယူခြင်းစနစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်စုစုပေါင်း power settings သုံးခုရှိသော်လည်း၎င်းတို့သည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
အနည်းဆုံး> စုစုပေါင်းမော်တာမှ 115W
အလယ်အလတ်> စုစုပေါင်းမော်တာမှ 180W
အများဆုံး> motor မှစုစုပေါင်း 350W
အများဆုံးစွမ်းအင်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Pascals ၂၂၀၀၀ ၏စုပ်ယူနိုင်သောစွမ်းအားကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်အခြားယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုလွယ်ကူပြီးကျွန်ုပ်တို့၏စမ်းသပ်မှုများအရကြမ်းခင်းနှင့်ကော်ဇောများကိုအလွယ်တကူဆေးကြောနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Jashen V16 နှင့်ပတ်သက်သောယေဘူယျလုပ်ဆောင်ချက်များမှာကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းပါသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၌အလေးထားရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၌စုတ်ယူရန်ခလုတ်မရှိဘဲ၊ ဖုန်စုပ်စက်ကိုဖွင့်သို့မဟုတ်ပိတ်သောခလုတ်တစ်ခုသာရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ဤသေးငယ်သောခလုတ်မထားခြင်းကသာမာန်ထက်အနည်းငယ်ပိုဘက်ထရီသုံးစွဲသည်။
LED မျက်နှာပြင် ယင်းအစား၎င်းသည် parameters များဆက်တိုက်မှတဆင့် illuminated ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်ခြင်းမရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့တွင်ထိပ်ပိုင်းတွင်ညှိထားသောခလုတ်အချို့ရှိသည်။ အလေးချိန်သည်၎င်းကိုသုံးသောအခါကြီးမားသောပြnotနာမဟုတ်သည့်နည်းတူကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအခန်းတွင်အတော်လေးပျော်ရွှင်ကြသည်။
ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အားသွင်းဘူတာက၎င်းအတွင်းရှိအပိုပစ္စည်းများကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပြီး၎င်းသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တန်ဖိုးထားသည်။ ပါဝါ adapter ကကျန်တဲ့အထုပ်ကိုချိတ်ပြီးလာပြီးဖရီချိူးတွေမလိုပဲသူ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်။
စုတ်ယူနိုင်သောစွမ်းအင်အတွက်ဘက်ထရီသည်အများဆုံးစွမ်းအင်ဖြင့်ပျံသန်းသည်၊ အလယ်အလတ်ပါဝါဖြင့်ကူရှင်ချုပ်ခြင်းနှင့်ကြမ်းခင်းကိုပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်လုံလောက်ပုံရသည်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်အနည်းဆုံးပါဝါကကျွန်တော်တို့ကိုသိပ်အသုံးမဝင်ပါဘူး။ အမြင့်ဆုံးသောစွမ်းအားသည်ဇိမ်ခံပစ္စည်းအဖြစ်အဆက်မပြတ်အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်၊ သို့သော်ဆူညံသံသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဤလုပ်ဆောင်မှုကိုခွင့်မပြုပါ။ ၎င်းသည်သင်၏အိမ်၏အခြေခံသန့်ရှင်းရေးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သောအလွန်အမင်းစွယ်စုံဖုန်စုပ်စက် Jashen V16 အသစ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ယေဘူယျအတွေ့အကြုံဖြစ်သည်။
သင်သည် Jashen V16 ကို ၀ ယ်နိုင်သည် အမှတ်တံဆိပ်သည်သင်တို့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးခဲ့သောဤအထူးကမ်းလှမ်းမှုများဖြင့် -
ဒီအပေါ် 16% လျှော့စျေးနှင့်အတူ S50 အီးမော်ဒယ် LINK ကူပွန်နှင့်အတူ « 102 ယူကရိန်း»
ဒီအပေါ် 18% လျှော့စျေးနှင့်အတူ S50 X ကိုမော်ဒယ် LINK ကူပွန်နှင့်အတူ « 145 ယူကရိန်း»
အနည်းငယ် flimsy ပစ္စည်းများ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » Jashen V16၊ အသေးစိတ်လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်၎င်း၏အင်္ဂါရပ်အားလုံး